मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत आजको अन्तिम सभा कैलालीको लम्कीमा सम्पन्न , भोलिको कार्यक्रम कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा हुने
नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत आजको अन्तिम सभा कैलालीको लम्कीमा सम्पन्न भएको छ । विशाल जनसमुदायका बीचमा आयोजित उक्त सभामा विभिन्न समुदायका झाँकीहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकलाई नेतृत्व गर्न एमालेबाहेक अरु कुनै दल छैन । हामीले सत्तामा रहँदा वा नरहँदा आफ्नो मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छौँ । सामाजिक सद्भाव बढाउन र १ सय २६ जातिलाई समेटेर बलियो मुलुक बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ । जनताको यो समर्थनले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।
एमालेको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्नेहरुले थाहा पाऊन्, जनताको समर्थनका कारण हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । ०५१ सालमा सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गर्दासम्म बृद्धाबृद्धालाई मार्छ भन्ने प्रचार गरियो । त्यसका लागि नाम संकलन गर्दासमेत खाल्डो खनेका छन्, पुर्नका लागि नाम टिपिरहेको छ भन्ने प्रचार गर्दथे । अहिले पनि एमालेसँग राजनीतिक रुपमा सामना गर्न नसकेपछि अनेक आरोप लगाइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको विकासका लागि एमालेले विशेष ध्यान दिएको छ । यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नेदेखि अरु ठूला आयोजना निर्माण जस्ता काममा हामीले ध्यान दिएका छौँ ।
एमाले विदेशीसँग कहिल्यै झुक्दैन, मित्रतामा घात गर्दैन ।
संविधानले मधेसीलाई अधिकार दिएन भन्ने प्रचार गरिएको छ । म सोध्न चाहन्छु, पहाडीलाई दिएको कुन चाहिँ अधिकार संविधानले मधेसीलाई दिएको छैन ? एउटा मात्र उदाहरण दिनका लागि म चुनौती दिन चाहन्छु ।
संसारको कुन चाहिँ मुलुकमा संविधान बन्दा शतप्रतिशत मानिसहरुको समर्थन रहेको छ ? विमती जहाँ पनि हुन्छन्, तिनलाई समयक्रममा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मधेसी मोर्चाका नाममा भोटको राजनीति गर्नेहरुले नेपाली देशभक्ति देखाउनुपर्छ, विदेशी दूताबासमा धाउनुभएन, विदेशीको चाकडी गर्नुएन, नेपाली भएकोमा गौरवबोध गर्नुपर्यो ।
कञ्चनपुरमा भएको घटनाका सम्बन्धमा भारतले नेपालसँग माफी माग्नुपर्छ । ०१६ सालमा उत्तरी सीमामा यस्तै हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले हिम्मत गरेर चीनसँग माफी माग्नुपर्छ भनेका थिए । अहिले प्रचण्डमा त्यो हिम्मत छ कि छैन ? साहसका साथ के उनले त्यो भारतसँग भन्न सक्छन् ? जीवनको मूल्य पैसासँग त साट्न सकिन्न तर गोविन्द गौतमका परिवारको रेखदेखका लागि पाँच करोड भारु क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सरकारले लम्पसार हुने नीति छाडोस्, नेपालका पक्षमा उभियोस् ।
स्थानीय चुनाव त घोषणा भएको छ तर सरकारले खुट्टा त कमाइरहेको छैन ? हामीलाई शंका छ । आगामी माघ ७ गतेसम्म तीनै तहका निर्वाचन नगरेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्रमा सामेल त भइरहेको छैन ?
उपाध्यक्ष तथा सात नम्बर प्रदेश संयोजक भीम रावलले भन्नुभयोः
सेना, प्रहरी र गुप्तचरमा समेत समानुपातिक सहभागिता नेपालबाहेक अरु कुन देशमा छ ? विदेशी महिलालाई एउटा हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता नेपालमा छ । अझ पनि पुगेन भन्नेले दुनियाँ बुझेकै छैनन् ।
तराई मधेसका जनता एमालेको पक्षमा छन् । यदि कसैलाई छैनन् भन्ने लाग्छ भने चुनाव गरौँ, परिणाम देखिहाल्छ ।
मुलुकको सार्वभौमिकताका विस्द्धमा क्रियाशी्रल तत्वहरुलाई खबरदारी गर्नका लागि हाम्रो अभियान जारी छ । यसमा जनताले देखाएको समर्थनबाट ती तत्वहरुलाई गतिलो जवाफ भएको छ ।
एमाले अरु कुरा सहन सक्छ तर कसैले सामाजिक सद्भाव विथोल्न खोज्छ, राष्ट्रको हितमा कुठाराघात गर्न चाहन्छ, ६० वर्षदेखिको जनताको चाहना अनुरुप बनेको संविधानमाथि कसैले कुठाराघात गर्न चाहन्छ भने ्एमाले किमार्थ स्वीकार गर्न तयार छैन, चट्टान जस्तो भएर उभिनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । यो कुनै एक दलको चाहनासँग जोडिएको छैन, मुलुकसँग जोडएको छ, संविधान र लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ ।
संविधान संशोधन नेपाली जनताको एजेन्डा होइन । म पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईंहरु कसका एजेन्डाको भरिया बन्नुभएको छ ? नेपाली भाषालाई सखाप पार्ने, अंगीकृत नागरिकलाई मुलुकको बागडोर सुम्पिने, पहाड र मधेस टुक्र्याउने तपाईंहरुको योजना हामी कदापि पूरा हुन दिन्नौँ ।
कैलाली जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य केवालाल चौधरीले थारुहरुले रगत पसिनाले सिञ्चित गरेको पार्टी एमाले भएकाले थारुहरुको हकहितका लागि यसको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जातिवादीहरुको भड्कावमा नलागी एमालेका पक्षमा लाग्नुपर्छ, यसबाट मात्रै थारुहरुका थप अधिकार स्थापित हुन्छन् । अबको निर्वाचनमा एमालेलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’
केन्द्रीय कमिटीका बैकल्पिक सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज झपट रावलको अध्यक्षता र कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारीको सञ्चालनमा आयोजित सभामा सहभागीहरुलाई स्वागत सात नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य महादेव बजगाईंले गर्नुभएको थियो ।
भोलिको कार्यक्रम कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा हुनेछ ।